ရက်ပေါင်း ၁၀၀ တိုင်းရင်းသားဒေသ လူထုလှုပ်ရှားမှု အကျဉ်းချုံး – Federal Journal
Today is: Monday, August 2, 2021
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနှင့်တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေး ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စိုင်းသီဟကျော် (ခ) စိုင်းဟပ်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
ေန႔စဥ္သတင္းမ်ား စုေဆာင္းတင္ျပျခင္း၊ နေ့စဉ်သတင်းများ စုဆောင်းတင်ပြခြင်း
ရက်ပေါင်း ၁၀၀ တိုင်းရင်းသားဒေသ လူထုလှုပ်ရှားမှု အကျဉ်းချုံး
(ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းမှ မေလ ၁၂ ရက်နေ့အထိ-၂၀၂၁)
စစ်တပ်မှ နိုင်ငံတော်အာဏာကို ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင် သိမ်းယူသည့် နောက်ပိုင်း ပြည်သူများက စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်မှုကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဆန့်ကျင်တော်လှန်ကြသည်။ CDM (ရုံးမတက်) လှုပ်ရှားမှုမှစတင်ပြီး လူထုဆန္ဒထုတ်ဖော်မှု နှင့် ထိုမှတဆင့် နောက်ပိုင်းတွင် ပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေး (စစ်ရေး)လှုပ်ရှားမှုနှင့် ပြည်နယ် တွင်း အတိုင်ပင်ခံကောင်စီများ အသီးသီးဖွဲ့စည်း သည်အထိ ပေါ်ပေါက်လာပါသည်။ မိမိတို့ Federal Journal အဖွဲ့က တိုင်းရင်းသားဒေသအတွင်းရှိ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင် လှုပ်ရှား မှုကို လေ့လာစောင့်ကြည့်ရာ ရက်ပေါင်း ၁၀၀ ပြည့်သည်အထိ (မေလဆန်း) လူထုလှုပ်ရှားမှု အခြေအနေကို လက်လှမ်းမှီသလောက် အကျဉ်းချုံး စုစည်းထားပါသည်။
ချင်းပြည်နယ်ရှိ မြိုနယ်ရှင် မြို့ (၉)ခုစလုံးနှင့် မြို့ခွဲ(၂)ခုတို့တွင် ချင်းပြည်သူလူထုများ ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ပလက်ဝနှင့် တွန်းဇံမြို့မှအပ ကျန်မြို့များဖြစ်သည့် ဟားခါး၊ မင်းတပ်နှင့် ထန်တလန်မြို့၊ ဖလမ်း၊ မတူပီနှင့် ကန်ပက်လက်များတွင် ဆန္ဒပြလှုပ် ရှားမှုကို ပုံမှန်နီးပါး တွေ့ရသည်။ ထို့ပြင် မြို့နယ်အားလုံးနီးပါးတွင် ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (Chinland Defense Forces)များကို အသီးသီးဖွဲ့စည်းကြပြီး ‘ကြားဖြစ်ချင်းအတိုင်းပင်ခံ ကောင်စီကိုလည်း ဖွဲ့စည်းကြသည် ကိုတွေ့ရသည်။
၁။ လူထုလှုပ်ရှားမှု ဦးဆောင်ကော်မတီ လှုပ်ရှားမှု
ချင်းလူထုလှုပ်လှုပ်ရှားမှုကို ချိတ်ဆက်ညိုနှိုင်းဖို့အတွက် ချင်းလူထုလှုပ်ရှားမှု ညိုနှိုင်း အဖွဲ့ Chin Public Movement Coordination Body – CPMCB အား မတ်လ (၂၁) ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် ရန်ကုန်အခြေစိုက် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၏ ဉီးဆောင်မှုဖြင့် Chin Movement Alliance (CMA)ကိုလည်း ဖွဲ့စည်းသည်ဟု သိရှိရသည်။
၂။ နိုင်ငံရေးအင်အားစု ဖွဲ့စည်းမှု
ချင်းပြည်နယ်တွင် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ဖွဲ့စည်း ထား သော အင်အားစု အနေဖြင့် ကြားကာလာချင်းအမျိုးသား အတိုင်ပင်ခံကောင်စီ Interim Chin National Consultative Council – ICNCC ကို ဧပြီ (၁၃) ရက်နေ့က ချင်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ချင်းလွှတ်တော်အမတ်များ၊ CDM ဉီးဆောင် အဖွဲ့များ၊ ချင်းအရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာချင်းအဖွဲ့အစည်းများ ဆွေးနွေ တိုင်ပင်ပြီး ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ICNCC သည် ချင်းပြည်နယ်အဆင့်တွင် အစိုးရဖွဲ့နိုင်ဖို့ ဆောင် ရွက်နေပြီး ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးတို့အား ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
၃။ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းမှု
မေလ (၁၃) ရက်နေ့အထိ ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ် ၇ မြို့နယ်ဖြစ်သော ဟားခါး၊ ထန်တလန်၊ မတူပီ၊ မင်းတပ်၊ ကန်ပက်လက်၊ တွန်းဇံနှင့် ပလက်ဝမြို့နယ် တို့တွင် ချင်းလဲန် ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ Chinland Defense Force – CDF ဖွဲ့စည်းကြပြီဖြစ်သည်။ ကျန် မြို့နယ်များဖြစ်သော တီးတိန်နယ်တွင် Zomi Federal Union – ZFU ဖွဲ့စည်း ထားပြီး ဖလမ်းမြို့နယ်တွင် Chin National Defense Force – CNDF ဟုဖွဲ့စည်းသည်။ အချို့မြို့နယ်များမှာ စုစည်းဖွဲ့ထားသော မျိုးနွေစုနှင့် ဒေသအလိုက် ဖွဲ့စည်းလာသော အဖွဲ့ အစည်းများလည်းရှိသည် (သာဓက-CDF-Zotung)။ ချင်းပြည်နယ်နှင့် ကလေး-ကဘော် ဒေသတို့တွင် ချင်းအခြေပြု ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့(၁၆)ဖွဲ့ခန့် ရှိသည်ဟုသိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ်တွင် မြို့နယ်(၁၈)မြို့ရှိသည့်အနက် (၁၅)မြို့နယ်တို့တွင် ဆန္ဒပြလှုပ် ရှားမှုများ တွေ့ရှိရသည်။ နေ့တိုင်းနီးပါး လူထုလှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်နိုင်သည့် မြို့များ မှာ မြစ်ကြီးနား၊ ဝိုင်းမော်၊ ဖားကန့်၊ မိုးညှင်း၊ မိုးမောက်၊ ရွှေကူ၊ ဗန်မော်မြို့တို့ ဖြစ်သည်။ ကချင်ပြည်နယ်တွင် မြို့နယ်အလိုက် ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းမှု မရှိသလောက်ဖြစ် သည်။ ပြည်နယ်အတွင်း နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှု ၃ ခု–KPICT, KNC နှင့် KPPF —ရှိသော်လည်း KPICT ကသာလျှင် ရည်ပန်းအစားဆုံးဖြစ်ပြီး CRPH/NUG နှင့်လည်း တရားဝင် ချိတ်ဆက် ထားပါသည်။
မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် အဓိကအားဖြင့် မြစ်ကြီးနားမြို့ ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်းနှင့် အထွေထွေ သပိတ်စစ်ကြောင်းဟူ၍ စစ်ကြောင်းနှစ်ခုက ဦးဆောင်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ လက်ရှိ အချိန်အထိလူထုဆန္ဒပြပွဲများ ဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်သော ဖားကန့်ဒေသတွင် အဓိကအားဖြင့် မှော်အလိုက်ဦးဆောင်လှုပ်ရှားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုနည်းတူ ကချင်ပြည်နယ်တွင် မေလ (၁၁)ရက်နေ့အထိကချင်ပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာ လူထုလှုပ်ရှားမှု ဦးဆောင် ကော်မတီ သည် ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ အကြောင်းမှာ စစ်တပ်မှ ၎င်းလှုပ်ရှားမှု ဦးဆောင် ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တက်ကြွလှုပ်သူများအား ပစ်မှတ်လိုက်လံဖမ်းဆီးခြင်း၊ ဝရမ်းထုတ် ထားရာ မြို့နယ် အလိုက်ဖြစ်စေ၊ ဦးဆောင်သူများအချင်းချင်းအကြား ချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ အခက်အခဲကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း မြို့နယ်အချို့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင် အချို့ ပြောကြားချက်အရ ကချင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ လူထုလုပ်ရှားမှု ဦးဆောင်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြသည် ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ်တွင် political stakeholders (သို့) နိုင်ငံရေးအင်အားစုအနေဖြင့် အဓိက အင်အားစု(၃)ခု ရှိသည်။ KPICT (Kachin Political Interim Consultative Team)၊ KNC (Kachin National Council နှင့် KPPF (Kachin People Political Front) ဟူ၍ရှိသည်။ KNC နှင့် KPPF တို့သည် လက်ရှိတွင် လှုပ်ရှားမှုမည်မည်ရရ မတွေ့ရှိရ သေးပေ။ KPICT သည် ကချင်ပြည်သူမှ ကြိုဆိုထောက်ခံမှုအရဆုံးဟု ဆိုနိုင်သည်။ KPICT သည်အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ၎င်း၏ ဥက္ကဌကိုယ်တိုင်သည် NUG အစိုးရ ၏ ဒုတိယသမ္မတအဖြစ်ခန့်အပ်ထားသည်။
KPICT သည် မတ်လ ၉ ရက်မှ ၁၁ ရက်အထိ ကချင်အဖွဲ့အစည်းများ အစည်းအဝေးမှ ဖွဲ့စည်းထားပြီး ကချင်အမျိုးသားကိုယ်စား နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူ ညိုနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ KPICT ၏အဓိကရည်မှန်းချက်သည် ပြည်သူသည်သာ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဖြစ်ကြောင်း ခိုင်မာစေရန်၊ စစ်အာဏာရှင်အပြီးတိုင် ချုပ်ငြိမ်း စေပြီး ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက် တူသော ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့များနှင့် အတူ ပူးပေါင်းလက်တွဲရန်တို့ဖြစ်သည်။
ကချင်ပြည်နယ်သည် ပြည်နယ်အတွင်း စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နှင့် တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေသည့် အတွက် အင်အားကောင်းနေပြီဖြစ်သော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်သည့် KIA ဘက်သို့ ပြည်သူများနှင့် လူငယ်အများ စုပူးပေါင်းပါဝင်ကြသည်ဟု သိရှိရသည်။ ထို့ကြောင့် မြို့နယ်အလိုက် ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် အသစ်ဖွဲ့စည်းခြင်းသည် လက်ရှိ ကချင်ပြည်နယ် တွင် တွေ့ရှိခြင်းမရှိသေးပဲ။ ကချင်ပြည်နယ်ပြင်ပဖြစ်သော်လည်း တိုင်းရင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တို့၏ လက်လှမ်းမှီရာ ကချင်လူမျိုးများနေထိုင်ရသည့် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ဟိုပင် နှင့် အနီးတစ်ဝိုက်တွင်သာ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းကြောင်းသိရှိရပြီး လက်ရှိ အချိန် အထိ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် မထွက်သေးပေ။
ရှမ်းပြည်နယ်ရှိမြို့နယ်များတွင်တောင်ပိုင်းမြို့များဖြစ်ကြသောတောင်ကြီး၊ အောင်ပန်း၊ဆီဆိုင်၊ ဟိုပုံး၊ ကလော၊ အေးသာယာမြို့နယ်နှင့် မြောက်ပိုင်းမြို့များဖြစ်ကြသော တာချီလိတ်၊ လားရှို၊ မူဆယ်မြို့တို့တွင်ရှမ်းပြည်သူလူထုများ အဓိကဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ကြပါသည်။ တစ်ချို့မြို့နယ် များတွင် ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ရှင်း ပြည်နယ်တွင် နိုင်ငံရေး အစုအဖွဲ့များ ပူးပေါင်းသည့် Committee for Shan State Unity (CSSU) ရှိနှင့်နေပြီးသား ဖြစ်သော ကြောင့်လားမသိ၊ ပြည်နယ်/လူမျိုး တစ်ခုလုံးဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးစုစည်းမှုအသစ် ဖွဲ့စည်းထားခြင်း မတွေ့ရှိရပေ။
၁။ လူထုလုပ်ရှားမှု ဦးဆောင်ကော်မတီဖွဲ့စည်းမှုအခြေအနေ
ရှမ်းပြည်နယ်တွင် အဓိကအားဖြင့် အထွေထွေသပိတ်ဦးဆောင်ကော်မတီ၊ သမဂ္ဂ အဖွဲ့ များ၊ ၂၁ ရာစု မျိုးဆက်အဖွဲ့တို့က ဖွဲ့စည်းထားသော သပိတ်ဦးဆောင်ကော်မတီကို စစ်ကောင်စီ စစ်တပ်များက အကြမ်းဖက်မဖြိုခွဲခင်က ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ တိမ်းရှောင်ပြီး အင်တာနက်လိုင်းများ ပိတ်ပြင်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဆက်လက်ပေါင်းစည်းနိုင်ခြင်း မရှိတော့ဘဲ မြို့ကြီးအချို့တွင် အထွေထွေသပိတ်စစ်ကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသားသပိတ် စစ်ကြောင်းနှင့် ကျောင်းသားသမဂ္ဂတို့သာ အဓိကလှုပ်ရှားကြသည်။ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် လားရှိုးသပိတ် စစ်ကြောင်း၊ ကွတ်ခိုင်မြို့မှ ကွတ်ခိုင်သပိတ်စစ် ကြောင်းနှင့် နမ့်ခမ်မြို့တွင် All Ethnic Groups General Strike ဟူ၍ မြို့နယ်အလိုက်ဖွဲ့ စည်းထားသော လူထုလှုပ်ရှားမှု ဦးဆောင်ကော်မတီ အသီးသီး ရှိကြသည်။ လက်ရှိအချိန် အထိ ရှမ်းပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာ သပိတ်ကော်မတီဟူ၍ မတွေ့ရှိရ သေးသော် လည်း General Strike of Ethnic – Southern Shan State ဟူ၍ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း အထွေထွေတိုင်းရင်းသားသပိတ်ကော်မတီ ဟူ၍ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ဦးဆောင်ကော် မတီသာ ရှိနေသေးသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်သည် လက်ရှိအချိန်အထိ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ဖွဲ့စည်းထားသော အင်အားစု ဖွဲ့သည်းတည်ထောင်မှုသည် ကျန်ပြည်နယ် များထက် နှောင့်နှေးနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ သို့သော်လည်း မေလ (၁၀) မှစ၍ ရှမ်းပြည် နယ်တောင်ပိုင်း ကိုယ်စားပြုအမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရ SSNUG (Southern Shan National Unity Government) အား ဖွဲ့စည်းပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် လာသည်။ SSNUG သည် ဧပြီလ (၁၆) ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီဖြစ်သော အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအား အလေးအနက်ယုံ ကြည်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ပြည်သူလူထုနှင့်ပူးပေါင်းပြီး ကူညီဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် ဖွဲ့စည်းကြောင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
၃။ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းမှုအခြေအနေ
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့တွင် တောင်ကြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (Taungyi People Defense Force) အား မေလ (၁၀) ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။ T.PD.F အနေဖြင့် NUG အစိုး ရညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ဒေသအလိုက် ဖွဲ့စည်း ထားသော ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့များ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အင်အားစုများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ပူးပေါင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆန္ဒပြပြည်သူများနှင့် CDM ဝန်ထမ်းများ၏ အသက်အိုးအိမ် ကာကွယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ သည်။ ကျန်မြို့နယ်တို့တွင် မေ (၁၁) ရက်နေ့အထိ ဖွဲ့စည်းခြင်းမတွေရှိသေးပေ။
ကယားပြည်နယ်ရှိမြို့နယ် ၇ မြို့နယ်နှင့် မြို့နယ်ခွဲ ၃ ခုတို့တွင် ကယားပြည်သူ လူထု များ ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ပြည်နယ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့(KNDF)ကိုလည်း မြို့နယ် ၅ ခုကို အခြေခံ၍ ဖွဲ့စည်းထားပြီး နိုင်ငံရေးအရ စုစည်းသည့် အဖွဲ့ကို KSCC နာမည် ဖြင့် ဖွဲ့စည်းကြသည်။
၅။ ကယားပြည်နယ် လူထုလှုပ်ရှားမှုဦးဆောင်ကော်မတီများအကြောင်း
ကယားပြည်နယ်တွင် လွိုင်ကော်မြို့မှအခြေပြုပြီး စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျန်ရေး အထွေထွေ သပိတ် ကော်မတီဟူ၍ သပိတ်ဦးဆောင်ကော်မတီတစ်ခုသာ ဖွဲ့စည်းသည်။ အခြားမြို့များ ဖြစ်ကြသော ဒီမော့ဆိုနှင့် ဖယ်ခုံမြို့တွင်လည်း မြို့ခံလူထုက အသီးသီးဖွဲ့စည်းပြီး လွိုင်ကော်မြို့ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျန်ရေး အထွေထွေသပိတ် ကော်မတီနှင့် အချိတ်အဆက် ရှိသော လှုပ်ရှားမှုကော်မတီ နှစ်ခုရှိသည်။ ကျန်မြို့နယ်များတွင် လူထုလှုပ်ရှားမှု မထင်ရှား သည့်အတွက် လက်ရှိအချိန်အထိ လူထုလှုပ်ရှားမှု ကော်မတီများဖွဲ့စည်းမှု မတွေ့ရှိရပေ။
ကယားပြည်နယ် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် KSCC (Kareni State Consultative Council)ခေါ် ကရင်နီပြည်နယ် အတိုင်ပင် ကောင်စီကို ဧပြီ(၉)ရက်နေ့တွင် ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ လွှတ်တော်အမတ်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းများ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်းများ၊ လူငယ်နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တတ်သိပညာရှင်များ စုစည်း၍ဖွဲ့စည်းထားသည်။ KSCC အနေဖြင့် ကယားပြည်နယ် အတွင်း နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဌကို ဦးဆောင်ပြီး ကြားကာလ ကရင်နီပြည်နယ် ညီညွတ်ရေး အစိုးရ ကိုဖွဲ့စည်းပြီးကရင်နီပြည်နယ်၏ အုပ်ချူပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးတို့အား ဆက်ဆိုင်ရာမှ အကောင်ထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက် လမ်းညွှန်ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များအရ သိရှိရသည်။
၄။ ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်းအခြေအနေ
ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်(Karenni National Defense Force)တွင် ကရင်နီပြည်နယ်အခြေစိုက် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ၃ ဖွဲ့၊ ရှမ်းပြည်နယ်အခြေစိုက် PDF ၂ ဖွဲ့တို့နှင့်အတူ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များပါ ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသည်ဟု သိရသည်။ ကရင်နီပြည်နယ်မှာရှိသော လွိုင်ကော် PDF၊ ဒီးမော့ဆို PDF၊ နမ့်ဖက်ခုံ PDF နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ မိုးဗြဲ နှင့် ဖယ်ခုံ PDF စုစုပေါင်း ၅ မြို့နယ် အခြေစိုက် ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့များဖြင့် ဖွဲ့စည်းပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ကယားပြည်နယ်ရှိမြို့နယ်အားလုံးတွင် တိုးချဲ့သွား မည်ဟု သိရှိရသည်။
မွန်ပြည်နယ်ရှိမြို့နယ် ၁၇ မြို့နယ်တို့တွင်မွန်ပြည်သူလူထုများ ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။သို့သော်လည်း စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ စစ်တပ်နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့မှ အကြမ်း ဖက်ဖြိုခွဲပြီး နောက်ပိုင်းတွင် လူထုလှုပ်မှုနေရာများသိသိသာသာ လျော့ကျလာသည်။ ပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကို မွန်ပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ်တစ်ချို့တွင် ဖွဲ့စည်းသည်ဆိုသော်လည်း လှုရှားမှု မတွေ့ရပေ။ နိုင်ငံရေးစုစည်းမှုအတွက် (MNN)ဖွဲ့စည်းသော်လည်း အားကောင်းမှုမရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။
၅။ လူထုလုပ်ရှားမှု ဦးဆောင်ကော်မတီဖွဲ့စည်းမှုအခြေအနေ
မွန်ပြည်နယ်တွင် စစ်ကောင်စီမှ လူထုဆန္ဒပြပွဲများအား အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲပြီး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအား ဖမ်းဆီး၊ဝရမ်းထုတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများသည် ဘေးကင်းရာသို့ တိမ်းရှောင်ကြလာသောကြောင့် မွန်ပြည်နယ် လူထုလှုပ်ရှားမှု ဦးဆောင် ကော်မတီအား ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းမတွေ့ရှိရသေးပေ။ သို့သော်လည်း မြို့နယ်အလိုက် (သို့) ရပ် ကွက် အလိုက် ဦးဆောင်မှုနှင့် သိပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြခြင်းသည် ဆက်လက်ရှိနေသေးသည်။
မွန်ပြည်နယ်တွင် မတ်လ (၁၄)ရက်မှစ၍ မွန်အမျိုးသားတို့၏ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး အရံအင်အားစုအဖြစ်ရပ်တည်မည့် မွန်အမျိုးသားကွန်ယက်-Mon National Network (MNN)ကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဤသို့ဖွဲ့စည်းခြင်းအကြောင်းမှာ စစ်အာဏာသိမ်းပြီး နောက်ပိုင်း မွန်အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးပါတီမှ လက်ခံခဲ့သောကြောင့် မွန်အမျိုးသားထု အကြား သဘောထား ကွဲလွဲမှုများရှိလာခဲ့ရာ ပြန်လည်စုစည်းနိုင်ဖို့ ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မွန်အမျိုးသားကွန်ယက်သည် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနှင့်လည်း အချိတ်ဆက်ရှိကာ အာဏာရှင်စနစ်ပပျောက်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး၊ ကိုယ်တိုင်ပြဌာန်းခွင့်နှင့် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးအတွက် အခြေခံရပ်တည်ချက်တွေရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သို့သော် မွန်ပါတီ(MUP)နှင့် မွန်လက်နက်ကိုင် (NMSP)တို့က ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် အားကောင်းမောင်းသန်မရှိပေ။
မေလ (၁၃) ရက်နေ့အထိ မွန်ပြည်နယ်မြို့များဖြစ်သော မော်လမြိုင်မြို့၊ ပေါင်မြို့၊ ကျိုက်မရောနှင့် သိမ်ဇရပ်တို့တွင် မြို့နယ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ မော်လမြိုင်မြို့တွင် People Defence Force – Mawlamyine ဟူ၍ မေ (၁၃) ရက်နေ့တွင် သော်လည်း ကောင်း၊ သိမ်ဇရပ်မြို့တွင် PDF-Theinzayat၊ ပေါင်မြို့နယ်တွင် မေလ(၁၁) ရက်က National Guard-Paung၊ မေလ (၁၀) ရက်နေ့က PDF – Kyaikmayaw ဟူ၍ သော်လည်းကောင်း အသီးသီး ဖွဲ့စည်းကြသည်။
Federal Journal (Quarterly Publication)
Cherry Foundation- Myanmar
12 –6– 2021
THE KACHIN TODAY
Chin World News Website
Mon News Website
Khonumthung News Website
Copyright © 2016-2017. Federal Journal. Powered by Web Designer